တကယ်ထုတ်ခံရတော့မယ့် ဆိုးရှား ၊ အဖွင့်လှတဲ့ နည်းပြသစ်များ ၊ ဂိုးစသွင်းတဲ့ မက်ဆီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
တကယ်ထုတ်ခံရတော့မယ့် ဆိုးရှား ၊ အဖွင့်လှတဲ့ နည်းပြသစ်များ ၊ ဂိုးစသွင်းတဲ့ မက်ဆီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ နည်းပြ အိုလေ ဂန်နာ ဆိုးရှား ကို ထုတ်ပယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြပြီလို့ ခိုင်မာတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဘုတ်အဖွဲ့ ဟာ ဝက်ဖိုဒ့် ကို ၄-၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ မနေ့ ညက ပွဲအပြီးမှာ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ် ခဲ့ကြပြီး ဆိုးရှား ရဲ့ အနာဂါတ် နဲ့ ဘယ်သူ့ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ်မယ် ဆိုတာကို ၅ နာရီ ကြာအောင် ဆွေးနွေး ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ပက်ဂျီဆန် ကတော့ ဆိုးရှား ဟာ ရာသီကုန် အထိ သူ့ရဲ့ နေရာ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ထိုက်တန်ကြောင်း ထောက်ခံ ခဲ့ပြီး ဆိုးရှား ကို ထုတ်ပယ် ပါက ဝိန်းရွန်းနီ ဟာ အစားထိုးဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ ဝါရင့် ခံစစ်မှူးကြီး သီယာဂို ဆေးလ်ဗား ရဲ့ စာချုပ် ကို ထပ်မံ သက်တမ်း တိုးဖို့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း နောက်ဆုံးနှစ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ခရစ်ရှန်ဆန် နဲ့ အက်ဇ်ပီလီ ကွီတာ တို့ကို နူးကမ့် ထံ လာရောက် ကစားဖို့ တိုက်တွန်း သွားမယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မာဆယ်လို ဘီယေဆာ ရဲ့ လိဒ် ယူနိုက်တက် ကလည်း ချဲလ်ဆီး မှာ နေရာ မရ ဖြစ်နေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဘာကလေ ကို ဇန်နဝါရီ မှာ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နဲ့ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှူးကြီး ဆာဂျီယို အဂွေရို ဟာ နှလုံးခုန် မူမမှန်မှု ပြဿနာ ောကာင့် ဘောလုံး ကစားခြင်း ကနေ အနားယူရတော့မယ် လို့ သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေ လာခဲ့ ပါတယ် ။
အဂွေရို နဲ့ အတူ မန်စီးတီး မှာ ကစားခဲ့တဲ့ နာဆရီ ကလည်း ဒီသတင်းကို အတည်ပြု ထားပြီး သူနဲ့ ကွမ် ( အဂွေရို ) တို့ ဟာ အမြဲလိုလို စကားပြောဆို ဖြစ်ကြသူတွေလို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကွင်းလယ်လူ ဟယ်ရီဝင့် ကို ဦးစားပေး ခေါ်ယူမယ့် ကစားသမား တဦး အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးလေး မေဆင် ဂရင်းဝုဒ် ဟာ ကိုဗစ် ပိုး တွေ့ရှိ ခဲ့တာကြောင့် မနေ့ ညက ဝက်ဖိုဒ့် နဲ့ ပွဲကို လွဲချော် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကြားရက်မှာ ကစားမယ့် ဗီလာရီးရဲ နဲ့ ပွဲ ကိုလည်း ပါဝင် နိုင်ဖို့ မရှိဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ဦးဆောင်သူ ချဲလ်ဆီး နဲ့ နောက်ကနေ လိုက်လံ ဖိအားပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လီဗာပူး တို့ နိုင်ပွဲ ကိုယ်စီ ရရှိခဲ့ကြပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ အဝေးကွင်းမှာ လက်စတာ စီးတီး ကို ၃-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ချန်ပီယံ ခြေစွမ်းကို ပြသခဲ့သလို လီဗာပူး ကလည်း အိမ်ကွင်းမှာ အာဆင်နယ် ကို ၄-၀ နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင်ယူကာ ဂန်းနား တို့ရဲ့ ၁၀ ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲ မရှိမှု ကို ရပ်တန့် ပစ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီတပတ် မှာ အသင်းသစ်တွေ ကို စတင် ကိုင်တွယ် ခဲ့ကြတဲ့ စတီဗင် ဂျရတ် ( ဗီလာ ) နဲ့ ဒင်း စမစ် ( နောဝှစ် ) တို့ ဟာ မနေ့ညက ပွဲတွေမှာ နိုင်ပွဲ ကိုယ်စီ ရရှိခဲ့ကြပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ကလည်း နည်းပြ အက်ဒီ ဟိုဝီ ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲမှာ ( ဟိုဝီ မကြီးကြပ် နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ) ဘရန့်ဖိုဒ့် နဲ့ ဂိုးတွေ အပြန်အလှန် သွင်းပြီး ၃ ဂိုးစီ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ဘာစီလိုနာ ဟာ နည်းပြသစ် ဇာဗီ ရဲ့ ပထမဆုံး ပွဲမှာ အက်စ်ပန်ညို အသင်း ကို မမ်းဖစ် ဒီပိုင်း ရဲ့ တလုံးတည်းသော ဂိုးနဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် လီဂူး မှာတော့ PSG ဟာ နန့်တက်စ် အသင်းကို ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး မက်ဆီ ဟာ ပြင်သစ် လိဂ် မှာ ပထမဆုံး သွင်းဂိုး ကို ရယူ သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article ဂျော်ဂျင်ဟိုရဲ့ နောက်ဆုံးရ ဒဏ်ရာ အခြေအနေ အကြောင်း အသိပေးရင်း ၊ လက်စတာနဲ့ ပွဲမှာ လွှမ်းမိုးမှု ကြီးမားခဲ့တဲ့ အသင်းသား ၂ဦး အပေါ် ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်လိုက်တဲ့ တူချယ်
Next Article လီဗာပူးတို့ အာဆင်နယ်ကို ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ကွင်းဘေးစည်းက အချင်းများခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းပြခဲ့ကြတဲ့ ကလော့နဲ့ အာတီတာ